စီးမိမှတော့ ပြုတ်မကျစေနဲ့ don’t fall | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စီးမိမှတော့ ပြုတ်မကျစေနဲ့ don’t fall
စီးမိမှတော့ ပြုတ်မကျစေနဲ့ don’t fall
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 11, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
ရန်ကုန်တိုင်းဝံကျီးခြုပ် ဦးမြင့်ဆွေဂ မီဒီယာတွေကို ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပီး စည်းကမ်းလိုက်နာဂျဖို့ သတိပေးဂျောင်း သတင်းများမှာ ဖတ်ရဒယ်။ အင်တာနက် ဖေ့ဘွတ် မီဒီယာတွေမှာ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်လို့ အခြေအနေပိုဆိုးတာလို့ အပြစ်ဖို့ဒယ်။ မင်းသားဂေါင်းဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူးစုတ် မူလရုပ်အသွင် မြင်နေရဘီ။ နဂိုထဲဃမှ မီဒီယာ၊ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရမယ်ရှာနေဒါ ရခိုင်အရေးနဲ့ အားလုံးကို ရောကြိတ်တော့မယ်ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်းဆို ကချင်အရေးလဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ပြီးဖို့မမြင်ဘူး။ ရခိုင်မှာ ဖြစ်တာလည်းဖြစ် ကိုယ့်အရေးကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ်ကြပါနဲ့။ ရေရှည်အမြင်နဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းစားဂျဗာ။ ရခိုင်ကိစ္စမှာ အခုအချိန်အထိ အမြတ်ထွက်နေသူဂ စစ်တပိုင်းအစိုးမရနဲ့ စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရက်တစ် အတိုက်အခံများ နေရာဝင် မယူနိုင်ဒါ အံ့စရာဗဲ။
ကိုယ်စီးနေဒါ အထီး၊ အမ ဆိုဒါထက် ဘာကောင်ဆိုဒါသိဖို့ အရေးကြီးဒယ်
၁၉၆၂ခုနှစ် ဦးနေဝင်း အာဏာသိမ်းတော့လည်း အစပိုင်း ဟုတ်တုတ်တုတ်ဆိုဒေါ့ အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးလိုက်တာ နောက်ဆုံးတိုင်းပြည် မွဲပြာကျသွားဒယ်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် စစ်တအာဏာထပ်သိမ်းဒဲ့အခါ ဟုတ်ချင်ဟုတ်အုံးမယ်ဆိုပီး မျက်စိမှိတ် လိုက်သူတွေ မနည်းမနော။ ဒါနဲ့ဗဲ ကြေးမုံဂျီးအမျိုး တရုတ်ကျွန် ဖြစ်ပြန်ရော။ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဦးသိန်းစိန်ဂျီး စစ်တပိုင်းအစိုးမရ အခြေခံဥပဒေအတုနဲ့ မျက်လှည့်ပြ တက်လာဗျံဒေါ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အခုမှစမှာနဲ့ မျှော်လင့်ဂျဗျံသေးသဗျ။ မိမိတို့ ရပိုင်ရဂွင့် အခြေခံအခွင့်အရေး တောင်းဆို လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်တာကိုဗဲ တိုင်းပြည်ဆူအောင်လုပ်တယ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိမ့်မယ်နဲ့ အပြင်လောကကို စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ ခလေးကို ဒေဝေါဂျီးလာလိမ့်မယ်ဆိုပီး ခြောက်လှန့်ဂျဒယ်။
ရခိုင်ကိစ္စ ကြီးကျယ်ဒါ လက်ခံဒယ် သို့သော် စစ်တပိုင်းအစိုးမရ တုံ့ပြန်ပုံကို သတိပြုစောင့်ကြည့်ဂျဗာ။ အခုအရေးကို အကြောင်းပြပီး နောက်ပိုင်းအခွင့်အရေး တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှု၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်ရေး တရားစီရင်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်လာနိုင်ဒယ်။ သတင်းအမှောင်ချတဲ့ ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်ခေတ်မှာ အားလုံးကောင်းပါသည် ဆရာဂျီးဆိုပီး အေးချမ်းဂျင်ယောင်ဆောင်နေပေဗဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသားဒေါ့မှ မီဒီယာသမား နိုင်ငံရေးသမားတွေဖွလို့ပါ လုပ်လာရင် အချိန်နဲ့တဗျေးညီ တွန်းလှန်ဂျပါ။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုး ဘာသာ ဝါဒ ပေါင်းစုံ အသီးသီးဂလည်း မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လစ်ဘရယ်အတွေးအခေါ်များ ပျံ့နှံ့စေပီး မတူကွဲပြားသူများ အချင်းချင်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး အမြန်ဆုံးထူထောင်ဂျဖို့ တိုက်တွန်းပါ၏..။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုး ဘာသာ ဝါဒ ပေါင်းစုံ အသီးသီးဂလည်း မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လစ်ဘရယ်အတွေးအခေါ်များ ပျံ့နှံ့စေပီး မတူကွဲပြားသူများ အချင်းချင်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး အမြန်ဆုံးထူထောင်ဂျဖို့ တိုက်တွန်းပါ၏..။
BBC ကိုတော့ ပြည်သူားတွေ ချဉ်နေကြပါဘီ
ရခိုင်အရေးဟာ ၁ ချက်ပစ်ပြီး ၃ကောင်သိမ်းမယ့် အနေအထား လို့မြင်မိပါတယ်။
ခင်ဗြားဒို့တဒွေ.. ဘီးဘီစီးလဲဆဲဒယ်။ ဗီးအိုအေလည်းဆဲဒယ်။ စီးအန်အန်လည်းဆဲဒယ်..ရှိဒမျ နိုင်ဂံဂျားမီးဒီယားတွေနော်.. ဆဲဒယ်
ဂျောင်းဒါးဂေါင်းဆောင် ဂိုးမြအေးလည်းအဆဲခံရဒယ်။ သူ့ဒမီးလည်းအဆဲဂံရဒယ်။
ဒေါအောင်ဇန်းစူးဂျီနော.. ဘားမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုဘီး အဆဲခံရဒယ်။
ကားလားလည်းဆဲဒယ်။ မွတ်ဇလင်လည်းဆဲဒယ်။ တရုတ်လည်းဆဲဒယ်.. ရခိုင်းလည်းဆဲဒယ်။ အဂျင်းဂျင်းလည်း ဆဲဒယ်
ဒီ ကာလား ဘာ ကုလားလဲ ကွ …
ဟိုဘက် ကာလား လား ဒီဘက် ကလား လားးး
ဟိုဘက် ကာလားဆိုရင်တော့ ဒန် တန့် တန် …
လေထဲကနေ ပစ် မှာနော် .. ဘာမှတ်လဲ …
ဘိုင်ကြီး ခိုင် နော်
အိုက်လို ပြောနှဲ နော်
အိုက်လို ပြောဂျေး ဆိုနှော်
ဂေဇက်မှာ မေတ္တာတွေ များဂျီးဘဲနော်
မီးဒို့ ဘီဗာဒွေ အားကုံးလုံး ဆဲဒယ်နော်… တဂျီးကိုနော် မဆဲဂျနဲ့နော်..
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသားဒေါ့မှ မီဒီယာသမား နိုင်ငံရေးသမားတွေဖွလို့ပါ လုပ်လာရင် အချိန်နဲ့တဗျေးညီ တွန်းလှန်ဂျပါ။
ကျွန်မ ဘီဘီစီ တွေ နဲ့ တစ်ခြား နိုင်ငံခြား မီဒီယာ တွေ ဘက်က လိုက်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အမှန်တော့ အဲဒီလို မီဒီယာ အကြီး တွေ က ဘယ်သူ့ကြိုးဆွဲ မှု ကို မှ ခံမယ်မထင်ပါဘူး။
သတင်း ကို သတင်း အမှန်အတိုင်း ရေးချင်မှာပါ။
ပြသနာ က မြန်မာပြည်မှာ သူတို့ ကို သတင်းယူခွင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးမထားတော့ ရတဲ့ နေရာတွေ ကနေ စုယူရင်း အသံမှား တွေ ကြားရတာဖြစ်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
သူတို့ အသံအမှန်တွေ ကို တကယ်ကြားချင်ကြတာပါ။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ တစ်ခါ ကျွန်မ အမျိုးသားက မြန်မာပြည် နဲ့ပါတ်သက်ပြီး သူတို့ သတင်း ကို ဝင်ဆွေးနွေးလိုက်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ နောက်မှာ တကဲ့ ကို အရေးတယူ နဲ့ သတင်းအမှန်တွေ သူတို့ လိုချင်ကြောင်း ကို ပြန်ပြောပါတယ်။
အမှန်တော့ မီဒီယာကောင်း ဆိုတာ ရတဲ့ သတင်း တစ်ဖက်ထဲ ကို ဘဲ ဘက်လိုက်ပြီး တော့ မပြောသင့်ပါဘူး။
ဘီဘီစီ ကို တရားဝင် သတင်းယူခွင့် ကြည့်လိုက်ပါလား။
အဲဒီ ရခိုင်ထဲ ကို အသက်စွန့်ပြီး သတင်းမှန်ယူဖို့ ရောက်နေတာကြာပြီ။
အခု ဟာက သူတို့မှာ ဘင်္ဂလားဒက်ခ်ျ ဘက်ကလဲ ဝင်မရလို့ နေမှာပါ။
ဒီတော့ သတင်းအမှန်ဖြစ်ချင်ရင် သတင်းမှန် သိ အောင်ကြိုးစားပြီး ဘက်လိုက်မှုမပါဘဲ သူတို့ ကို သတင်းပေး ဆက်သွယ်ပေးဖို့ ဘဲလိုပါတယ်။
ကြားမှာ ပြသနာ ကို မရှုပ်ရှုပ်အောင် မကြီးကြီးအောင် တွန်း တိုက်ပေးနေသူလဲ အများကြီးပါဘဲ။
အားလုံး ကို သတိမပြတ်ရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မတို့ ရဲ့ မျက်မှန်စိမ်းတွေကိုလဲ ချွတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
မဟုတ်ရင် အားလုံး ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
kyar kite par tal so hmaapauk lay net lar lo maay pyaw nay pyan b.
ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေတာကနေ ၊ရှေ့ထွက်ပြီး ဂျွမ်းပျံအောင်မြှောက်ပေးနေပြန်ဘီ၊
ကမှော်လည်း ပါသေး ဟေး ဟေး။
တို့ဂဇက်ကမျှတပါဒယ်၊မစိုးရိမ်ဂျဘာနဲ့၊သမ္မတ ဂျီးကောင်းဂျောင်းလည်း တင်ပေး မဟုတ်လာလို့—၊
ကောင်းရင်ကောင်းသလို/မကောင်းရင်မကောင်းသလိုပ—– ဝေး —-။
Violence in Myanmar: Notareligious conflict butaplotted terror attack.
By Tharabar | Posted June 9, 2012 | Maundaw, Myanmar
On 9th June 2012, the US Department of State spokeswoman Victoria Nuland told their concerns about the recent murder case of 10 Muslim pilgrims in Myanmar. A day before she made her comment, some civilians are being attacked byamob in Rakhine state in western Myanamr. Many news agencies described the incidnets as religious conflicts by using the words “Buddhists”, “Muslims”. Is it reallyareligious conflicts?
Some Myanmar local news agencies have already sent their reporters into the region and published the current situation on their respective websites. The reports indicate that local Rakhine civilians in Maungdaw district were attacked by the Rohingya mob. Dozens of Rakhine villages were burnt down and many of villagers fled away and sought refuge in monasteries. The security forces were trying to control the situation in the Town. Even though the security was restored on the Maundaw Township on Saturday, 19 villages Rakhine ethnics groups were destroyed.
According to the state media,7death and 17 seriously wounded (includingafamily of medical doctor) and 494 houses, including the home ofareporter of Eleven Media Group (EMG), were destroyed in the violence. Also some reports appear on social network about some mob attacks on Sittway, the city of Rakhine state.
10 people, killed byamob asaconsequence ofarape and murder case happened in Rakhine state, are actually not local people. Most of them are Myanmar Muslims from Irrawaddy delta area, thousand miles far away from Maungdaw. They are Burmese Muslims and not Rohingya. The incident happened on the way back of their home fromareligious ceremony.
Because of that incident, Myanmar Muslims protest in the heart of Yangon, the former capital, called for justice and government reacted rapidly, by organizingacommittee and started to investigate the case. The demonstration ended peacefully afterafew hours.
But the terror attacks happened in Rakhine stateaday after. Most of the people believed that murdering 10 Muslim pilgrims isaset-up case to raiseareligious riot between Buddhist and local Muslims. Their motive is believed to bearacial abuse to wipe out Rakine civilians and occupy the territory. Some witness said they shout to the Rakhine villagers not to come back the villages while they set fire on the houses. They are Bengalis, so called Rohingya who were denied by Bangladesh to recognize them as their citizens, even though they speak the same language, and have the same religion and customs.
A person from Rakhine Ethnices Party called it as terrorist attack. He told EMG “This isaterrorist attack. It cannot be neglected. Despite all the citizens have the rights of religious freedom, Rohingya people are not involved in 135 Myanmar national ethnics…”
(Ko) Mya Aye of the 88 Generation Students Group said to local news agencies “I entirely condemn this terrorist attack. The concerned persons must rebuild the houses of victims in these arson attacks. The government should take legal action against these terrorists.”
(Ko) Mya Aye isawell known Muslim andaleader of 88 Group, who led 1988 uprising for democracy. They also madeapress conference and denied Rohinja asanationality. ”Rohinja affair is nothing related to Muslim”. They reasoned that the recent violences are due to illegal migrants and are linked to hidden agendas.
Dr. Aye Maung, chairman of the Rakhine Ethnics Development Party, told EMG “The situations in Maungdaw Township are very serious. The problem should be solved by legal procedures…… If the problem becomes bigger, it is possible to result in series of cases..”
Meanwhile, some photos of incident posted byafacebook account ofaPresidential office officer. Political parties, activist leaders, and Myanmar Muslim Associations are making announcements urging to avoid the possible religious clash and not to spread the violence over the country.
However, some news agencies already titled the news about recent violence as “Muslim-Buddhist violence”, but it is difficult to accept it according to the reports we received.
ဒီအောက်က လင့်ခ်လေးလဲ သွားလေ့လာကြပါဦးဗျား..
ဦးကြောင် နဲ့ …တစ်သဘောတည်းပါပဲ…ခင်ည ။